အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းတွေနဲ့ ပုရိသတို့ ရင်တခုလုံး ဗြောင်းဆန်အောင် လုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် – Online News Post
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းတွေနဲ့ ပုရိသတို့ ရင်တခုလုံး ဗြောင်းဆန်အောင် လုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
သူမ ကတော့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေ နဲ့ အတူ Hello Guys!!! မွေစံ ရဲ့ video အမိုက်စား ကို အမြည်းတင် ပေးလိုက် တယ် လို့ လူမှု ကွန် ယက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ ရေးသား ထားခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ သူမ ရဲ့ အသည်းယား စရာ ပုံစံလေး နဲ့ လှပ နေတဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေ ဟာ ပရိသတ် တွေ ကို အချစ်တွေ ပို စေ ခဲ့တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ ချစ် ပရိသတ် တွေ အတွက် မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ ကြွေလောက် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေ ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပြီး အဆိုပါ ပုံရိပ်လေး တွေ ကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင် ပါ တယ်..။
မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ က တော့ လက်ရှိ မှာ အောင်မြင်လျက် ရှိနေ တဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေထဲ မှာ တစ်ယောက် အပါ အဝင် ဖြစ်ပြီး အနု ပညာ အလုပ် တွေ ကို လုပ်ကိုင် လျက် ရှိနေ ကာ ကြော်ငြာ တွေကို လည်း ရိုက်ကူး လျက်ရှိ နေသူ လေးပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ အမိုက်စား ဖက်ရှင် လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင် လေ့ရှိ တဲ့ သူမ က တော့ မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေး မှု ရော ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို ပါ အခိုင်အမာ ရယူထား နိုင် ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။
အမိုက်စား ပုံရိပ် လေး တွေ ကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက် တင်ပေး လေ့ရှိ တဲ့ သူမ ကတော့ ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင် အမာ ရယူ ထားနိုင် သူလေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင်ထား နိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ က တော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တော်လေး ဆို ရင်လည်း မမှားပါ ဘူး..။ သူမ ကတော့ ယခု မှာ အလန်းစား ဖက်ရှင် လေး ကြောင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှတရား လေး ပေါ်လွင် နေ ပြီး အမိုက်စား ပိုစ့်လေး တွေ ပေးနေ ခဲ့ပါ တယ်…။
သူမ ကေတာ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြ နဲ႔ အတူ Hello Guys!!! ေမြစံ ရဲ့ video အမိုက္စား ကို အျမည္းတင္ ေပးလိုက္ တယ္ လို႔ လူမႈ ကြန္ ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္မွာ ေရးသား ထားခဲ့ တာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ သူမ ရဲ့ အသည္းယား စရာ ပုံစံေလး နဲ႔ လွပ ေနတဲ့ ပုံရိပ္ေလး ေတြ ဟာ ပရိသတ္ ေတြ ကို အခ်စ္ေတြ ပို ေစ ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ ခ်စ္ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ေမာ္ဒယ္လ္ နန္းေမြစံ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံစံေလး နဲ႔ ေႂကြေလာက္ စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ ပုံရိပ္ေလး ေတြ ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ၿပ ေပးလိုက္ ၿပီး အဆိုပါ ပုံရိပ္ေလး ေတြ ကို ေအာက္မွာ ၾကည့္နိုင္ ပါ တယ္..။
ေမာ္ဒယ္လ္ နန္းေမြစံ က ေတာ့ လက္ရွိ မွာ ေအာင္ျမင္လ်က္ ရွိေန တဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ေတြထဲ မွာ တစ္ေယာက္ အပါ အဝင္ ျဖစ္ၿပီး အႏု ပညာ အလုပ္ ေတြ ကို လုပ္ကိုင္ လ်က္ ရွိေန ကာ ေၾကာ္ျငာ ေတြကို လည္း ရိုက္ကူး လ်က္ရွိ ေနသူ ေလးပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ အမိုက္စား ဖက္ရွင္ ေလးေတြ ကို ဝတ္ဆင္ ေလ့ရွိ တဲ့ သူမ က ေတာ့ မိန္းကေလး ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပး မႈ ေရာ ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈ ကို ပါ အခိုင္အမာ ရယူထား နိုင္ ခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ေယာက္ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။
အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေလး ေတြ ကို လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္ တင္ေပး ေလ့ရွိ တဲ့ သူမ ကေတာ့ ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈ ကို အခိုင္ အမာ ရယူ ထားနိုင္ သူေလး ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွ ကို ပိုင္ဆိုင္ထား နိုင္ ခဲ့တဲ့ သူမ က ေတာ့ ပရိသတ္ေတြ ရဲ့ အခ်စ္ေတာ္ေလး ဆို ရင္လည္း မမွားပါ ဘူး..။ သူမ ကေတာ့ ယခု မွာ အလန္းစား ဖက္ရွင္ ေလး ေၾကာင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ အလွတရား ေလး ေပၚလြင္ ေန ၿပီး အမိုက္စား ပိုစ့္ေလး ေတြ ေပးေန ခဲ့ပါ တယ္…။
Previous post ပုရိသတို့ ရင်ခုန်သံတွေ ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားအောင် အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဟန်ပန်လေးနဲ့ ညို့ယူလိုက်ပြန်တဲ့ ပိုပိုရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး